Momba anay - Yantai Stamina Mining Equipment Co., Ltd.
Yantai Stamina Mining Equipment Co., Ltd natsangana tamin'ny taona 2009, miorina ao Yantai, Shandong, tanàna misy seranan-tsambo misokatra ao Shina.
Yantai dia tanàna amoron-dranomasina mahafinaritra sy miroborobo, eto isika manana rojom-panolorana feno, fivezivezena mivoatra, seranan-tsambo Yantai ary seranan-tsambo Qingdao dia tena mety amin'ny fandefasana erak'izao tontolo izao. Any amin'ny faritry ny varotra maimaimpoana (FTA) no misy antsika, manome ny politikam-pahefana maro hanentanana ny fanondranana ny governemanta.
Mifantoka amin'ny famolavolana sy ny famokarana fitaovana fitrandrahana harena an-kibon'ny tany izahay, matihanina amin'ny fantsom-panafody sy fanodinana mekanika momba ny kojakoja fitrandrahana fitaovana. Nanangona traikefa be dia be tamin'ny fizotran'ny fitrandrahana arintany izahay amin'ny sehatry ny fanasana arina sy ny fitaovana fanomanana.
Ny haronay centrifuge dia manondrana any ivelany any amin'ny faritra sy firenena maro, miaraka amin'ny vidiny ambany sy ny kalitao azo antoka. Ny takelaka sivana sy ny sobika centrifuge ataontsika dia vita amin'ny tariby 304/316 SS wedge, miaraka amin'ny fampisehoana tonga lafatra amin'ny fanoherana ny harafesina, fanoherana ny abrasion, ny fahombiazan'ny fanasana arina ary ny androm-piainany.
Drafitra andriamby sy SCREEN VIBRATING BANANA koa no vokatra mahazatra anay, azo namboarina daholo izy rehetra.
Niaina manam-pahaizana momba ny welding izahay izay mahazatra ny fenitra fantsom-pifandraisana iraisam-pirenena (fenitra DIN, fari-pahaizana AS / fenitra JIS / fenitra ISO ...), miaraka amin'ireo fepetra fanadinana lesoka matihanina.
Manana fitaovana milina isan-karazany isika toy ny milina lathe lehibe, milina fandavahana fiara, milina fikosoham-bary, milina fandanjalanjana sns.
Ekipa teknika no fototray, ny injenieranay dia efa za-draharaha tsara, miaraka amina ambaratonga avo lenta ary afaka mamaha olana.
Taorian'ny fandrosoana sy fanavaozana nandritra ny 10 taona mahery, Stamina dia nanangana fiaraha-miasa marin-toerana amin'ireo orinasa any ivelany maro any Alemana, Aostralia, Etazonia, Mongolia sns. Ny vokatra azonay dia tsy voatanisa amin'ny ankamaroan'ny mpanjifa. Miaraka amin'ny manam-pahaizana efa za-draharaha, fizotran'ny kalitao matihanina, fitaovana fanaraha-maso feno, fitaovana fanodinana faran'izay marina ary rafitra serivisy aorian'ny fivarotana, azo antoka fa afaka mahazo ny vokatra sy serivisy tsara indrindra ny mpanjifanay. Faharetana.